"CHEZ PERLE" kwi-LEVIE, indawo yokuhlala yonke uhlobo lwe-T4
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguStéphane
UStéphane ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-92% yeendwendwe zakutshanje.
Ifulethi lonke lohlobo T4 kumbindi welali yaseLévie kwingingqi encinci yeAlta-Rocca.
I-90m² ifulethi, ilungiswe ngokupheleleyo, kwindlu yesintu. Iqaqambe kakhulu, iyonwabela indawo edibanisa ubomi belali kunye nembono ecacileyo yendalo.
Kumgangatho wegadi, igumbi lokuhlala elikhulu le-30m² elinegumbi lokuhlala kunye nekhitshi elivulekileyo elivulekileyo elivuleleka kwithafa elinefenitshala (ifanitshala yasegadini, i-barbecue) kunye nendawo yokuhlamba impahla.
Phezulu, igumbi elikhulu lokuphumla elinedesika, ithala leencwadi, ibhedi endala eguqulelwe kwisofa enokusetyenziswa njengebhedi eyongezelelweyo. Amagumbi amabini okulala ngalinye linegumbi lokuhlambela lomntu. Enye ineebhedi ezili-160, enye ineebhedi ezili-140. Amagumbi okulala axhotyiswe ngeendawo zokugcina iimpahla. Izindlu zangasese ezimbini ezizimeleyo, enye emgangathweni.
Le ndlu ine-air conditioning ngokupheleleyo (i-air conditioning ebuyiselwa umva). Indawo yokuhlala ifikeleleka ngeminyango emibini ezimeleyo, enye isuka esitratweni, enye isuka egadini.
Ilali yaseLévie yindawo esembindini yokufikelela kwiilwandle eziya ngasePropriano kunye nezibuko layo (30mns) okanye iPorto-Vecchio kunye nesikhululo seenqwelomoya saseFigari (45mns). Ikufutshane neendawo ezikhethekileyo zeBavella, L'Ospedale kunye neThafa leCuscione. Iindawo zakudala zaseCucuruzzu kunye neCapula zifikeleleka ngokuthe ngqo ukusuka kwilali ekwayindawo yokuqala yokuhamba ngeendlela ezininzi.
I-Lévie ibonelela ngazo zonke iivenkile kunye neenkonzo ezibalulekileyo (ikhemesti, iziko lezonyango, imarike encinci, iibhari kunye neeresityu, ibhrarha, indawo yokubhaka, iposi, ushicilelo lwecuba, isikhululo senkonzo, ithala leencwadi, i-art cutlery ifakwe phambi kwendawo yokuhlala, njl.njl.) . Imyuziyam yengingqi ye-archaeological Museum imele ibonwe kuye nawuphi na umthandi wembali. Idolophu inamabala entenetya amathathu kunye nebala lebhola ekhatywayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Levie